ဂရိတ်အကြောင်းအရာခံစားကြည့်ပါရန်, ဒါဟာအားလုံး Delivery အကြောင်းဖွင့်
Home » သတင်း » BBQ တက္ကဆက်စတိုင်
source - RalphSmyth
စီးရီးဟင်းချက် - Ralph စမိုက်သ Entertainment ကမကြာသေးမီကဒေသခံအနုပညာရှင် Jesse Pryles တပ်ဆင်ထားကြောင်းတက္ကဆက်အမဲသားကောင်စီအဘို့သင့်အမဲသားချက်ပြုတ်နှင့်ပျော်မွေ့ဖို့ဘယ်လိုအပေါ်တစ်ဦး 6-တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလူမှုမီဒီယာကမ်ပိန်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယာဉ်အသွားအလာနှင့်ဖြတ်သန်း-တလျှောက်တွင်ကြည့်ရှုမှုထူးချွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးမီက Austin, TX အတွက် Ralph စမိုက်သ Entertainment က၏အင်ဒရူး Lee က, Texas ပြည်နယ်အမဲသားကောင်စီများအတွက်အထူးစီမံကိန်းတွင်ညှစ် - tinyurl.com/ycrtojd3.
ဒေသခံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Jesse Pryles နှင့်သူမ၏အပြင်းစားအသားစားအမှတ်တံဆိပ်ရှပ်အင်္ကျီ (အသားကင် & Bourbon ... တစ်ဦးကအပြီးအစီးအစားအစာ) featuring, branded ချက်ပြုတ်ဗီဒီယိုများခြောက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစီးရီးကောင်စီရဲ့လူမှုမီဒီယာချန်နယ်များအတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
စီးရီးအတွက်ဒုတိယ segment ကိုပို့စ်တင်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံး 24-နာရီမှာကောင်စီသည် segment ကိုပြီးသား 500,000 အမြင်များ, 2.3k တုံ့ပြန်မှု, 696 ရှယ်ယာနှင့် 297 မှတ်ချက်များကိုကျော်တက် racked ခဲ့သည် Lee ကပြောသည်။
slim ဘတ်ဂျက် - တက္ကဆက်ပြည်နယ်အမဲသားဖြည့်စွက်စေခြင်းငှါနေစဉ်, Texas ပြည်နယ်အမဲသားကောင်စီများအတွက်ဘတ်ဂျက်တဲ့အစားအစာအပေါ်ကျိန်းသေရှိ၏ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ content တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့, အအချက်အလက်များ၏အားလုံးအနေနဲ့ OWC မာကျူရီ Elite Pro ကိုပေါ်သိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ်။
ယခု ရဲ့ တုန့်ပြန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ကြင်နာသူတို့အွန်လိုင်းထားတိုင်းဗီဒီယိုကြည့်ဖို့လိုလား!
စီမံကိန်းချောချောမွေ့မွေ့, ပညာရှင်ပီသစွာနှင့်တိကျစွာအလျင်အမြန်ပြုခဲ့သောကြောင့်, အဆိုပါစမိုက်သအဖွဲ့သည် Lee ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး OWC မာကျူရီ Elite Pro ကိုအပေါ်သူတို့ရဲ့ RAW နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအကြောင်းအရာအားလုံးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း, အ post ကိုအလုပျအတှကျ Adobe ကပရီးမီးယားလိဂ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
"သိုလှောင်ဖြစ်ကောင်းကျနော်တို့အကြောင်းကိုအများဆုံးအထူးသင်တအရာဖြစ်ပါတယ်" ဟု Lee ကပြောခဲ့သည်။ "MGM တက်ခူးနှင့်အမည်ပြောင်းခဲ့သော" ဘောလုံးထဲက "နှင့် Orion ရုပ်ပုံများတံဆိပ်အောက်မှာဖြန့်ချိ Intramural" ကျနော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်ကတည်းကကျနော်တို့တဦးတည်းဝန်ဆောင်မှုပေးအတူ flyer င့် "။ ကုမ္ပဏီလည်းမျိုးစုံပွဲတော်ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်တစ်ဦးကျဆုံးခြင်းလွှတ်ပေးရန်စီစဉ်ထားသော "ဆကျဆံ" ဟုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လေးနှစ်ခဲ့ရသည် "ဆကျဆံ" ။
"သင်ချင်ကြပါဘူးအကြောင်းအရာတူ - ကိုတကယ်မှမတတ်နိုင် - ဆုံးရှုံး" ဟုသူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
နောက်တစ်ခု: ကို Canon C200: ရုပ်ရှင်ရုံ RAW အလင်း, အဘယ်သူမျှမပြဿနာ!
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ ဇူလိုင်လ 2018 (497) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (780) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (685) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (608) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (122) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (358) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "BBQ တက္ကဆက်စတိုင်" ။ http://www.broadcastbeat.com/bbq-texas-style/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။